Maxaa ka soo kordhay shirarka Dhuusamareeb ? - Awdinle Online
Maxaa ka soo kordhay shirarka Dhuusamareeb ?
Shirarka gaar gaarka ah ee Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada uga socda magaalada Dhuusamareeb ayaa weli dhinac u dhicin, iyadoo la isku mari la’yahay qodobada qaar ee Madaxda ka hadleyso ee ah nooca doorashada.
Inkastoo shalay Madaxda ay ku jireen maalin nasasho ah oo aan kulamadii gaar gaarka ahaa dhicin, kaddib kulamadii dheeraa ee habeen iyo maalin ay yeesheen, hadana waxaa jiray kulamo kooban oo dhanka Hoyga Ra’iisul Wasaaraha ka socday.
Wararka aanu heleyno ayaa sheegaya in la qorsheynayo in shirka weyn inuu furmo gelinka dambe illaa caawa, isla markaana uu noqdo shir khudbado kaliya laga jeediyo, lana soo xiro, isla markaana la soo saaro war murtiyeed
Wararka ayaa sheegaya in war murtiyeedka oo qeyb ahaan hada diyaarsan yahay illaa hadda Madaxda isku fahmeen in doorashada noqoto doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda.
Labada qodob ee labadii maalmood la isugu hayay doorasho qof iyo cod ah oo Madaxweynuhu ku adkeysanayo, halka dowlad goboleedyada ay dalbanayaan Doorasho dad-ban oo ka qeyb galayaasha la kordhiyo, kana duwan tii 2016.
Sidoo kale qodobka kale ee la isku haayo ayaa ah Guddi Farsamo heer Federaal iyo Heer dowlad goboleed la sameeyo, isla markaana Guddigan ka soo baaraan dago labada qodob ee doorasho ee qof iyo cod iyo doorashada dad-ban, marka ay ka soo tala bixiyaan ay horkeenaan shirka soo socda ee Dhuusamareeb 3, kaasoo la qaban doono 15 maalmood illaa 30 maalmood kaddib.
Intii doodaha adag socdeen ayaa waxaa jira in Madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in shirka lagu soo daro Guddoonka Baarlamaanka, si haddii go’aano la qaadanayo ay qeyb uga noqdaan, hase ahaatee Maamul goboleedyada ayaa diiday.
Siyaasiyiinta ku sugan Dhuusamareeb ayaa sheegaya in shirarka hore Madaxweynaha uu muujinayay dabacsanaan, balse marka lakala tago oo shir labaad la isugu yimaado uu hadana Madaxweynuhu mowqifkiisa sidii hore ku laabanayay.
Illaa iyo hadda waxaa caddeyn mowqifka Ra’iisul Wasaaraha oo ku saabsan kaalintiisa kala guurka siyaasadeedka, waxaana mararka qaar uu u muuqda in dhanka Madaxweynaha uu jiro.
Maamul Goboleedyada ayaa ah kuwo isku mowqif ah oo hal isku aragti ah ula tagay Madaxweyne Farmaajo, taasoo ah in aanay doorasho qof iyo cod xilligan ka dhici karin, hase ahaatee Madaxweynaha ayaa ku adkeysanaya in aanu si fudud uga tanaasuli karin qodobkaas oo Baarlamaanka meel u joogo, ayna u baahan tahay waqti xal looga soo gaaro, shir kalena la isugu soo laabto.
Previous articleGolaha Shacabka oo ansixiyay Sharci
Next articleDanjiraha Shiinaha ee Soomaaliya oo ka degay Hargeysa iyo xog laga helay